HomeWararka MaantaMadaxweyne Kabore oo Xabsiga La Dhigay
Madaxweynihii dalka Burkina Faso Roch Kabore maanta lagu xiray saldhig militari, kaddib marki ay askar ka tirsan ciidanka kasoo qabteen gurigiisa oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Ouagadougou sida ay sheegeen Diblamaasiyiinta Galbeedka Afrika iyo ilo-wareedyo militari.
Gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha.
Mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig. Dadka deggan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhan maqlayeen rasaas xoogan.
Weerar ay kooxahaasi bishii November ku qaadeen saldhig ciidanka militarigu ay ku leeyihiin magaalada Inata, ee waqooyiga gobolka Soum, ayay ku dileen 49 askari oo ka tirsanaa booliiska iyo militariga iyo afar qof oo rayid ahaa.
Qalalaasaha ka taagan Burkina Faso ayaa yimid kaddib markii 18-kii bilood ee la soo dhaafay ay dalalka Mali iyo Guinea ee isla Galbeedka Afrika ka dhaceen, afganbiyo ay sameeyeen militariga labada dal.